रोनाल्डो किन युनाइटेड छाडेर रियल गएका थिए ? | Hamro Khelkud
रोनाल्डो किन युनाइटेड छाडेर रियल गएका थिए ?
म्याड्रिड (एजेन्सी)– क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जुन क्लबबाट खेले त्यहाँ निकै प्रभाव छाडेका छन् । त्यसमध्ये प्रिमियर लिगको सर्वाधिक सफल टोली म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि पर्दछ । इङ्ल्यान्डमा रहँदा रोनाल्डोले आफ्नो खेल कौशलमा निकै सुधार गरे ।
जब रियल म्याड्रिड पुगे त्यहाँ उनले आफुलाई विश्वकै उत्कृष्ट गोलकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरे । उनले रियलबाट ४ सय १ खेलमा ४ सय १४ गोल गर्नुबाट पनि उनको गोल गर्ने क्षमतालाई पुष्टि गर्छ ।
पहिलो पटक रोनाल्डो रियल जाने चर्चा सन् २००८ मा चलेको थियो । तर, युनाइटेडका तत्कालिन प्रशिक्षक एलेक्स फर्गुसनले उनलाई थप १२ महिनाको लागि क्लबमा राख्न सफल भए । अन्ततः २००९ मा उनी कीर्तिमानी रकमसहित रियलमा आबद्ध भए ।
त्यसबखत किन युनाइटेड छाडेर रियल गएको भन्ने विषयमा रोनाल्डोले भनेका छन्,’ मलाई लाग्यो म त्यहाँ गएर आफ्नो क्षमतालाई थप उजागर गर्न सक्नेछु । म देखाउन सक्ने छु की म फरक खेलाडी हु । मैले त्यो पुरा पनि गरे । रियलमा मेरो पहिलो सिजन उत्कृष्ट रह्यो । त्यसपछिका हरेक सिजनमा मैले अझै सुधार गर्दै लगेको छु ।’
चार पटकका बालेन डो ओर विजेता रोनाल्डो युनाइटेडलाई भने बिर्सन चाहदैनन् । युनाइटेडकै कारण आफु विश्व स्तरीय खेलाडी बन्न सफल भएको उनको मान्यता छ । ‘म रेड डेभिल्सलाई कहिल्यै विसन सक्दिन, पुर्चिगिज स्टारले भने, मैले त्यहाँ जति सक्दो राम्रो गर्न सिके । जसले गर्दा म विश्वको उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल भए ।’